Wararka qaar ayaa soo daatay oo loo xaqiijin karo MacBook Pro 14 iyo 16 inji | Waxaan ka imid mac
Haddii aan xoogga saarno daadinta iyo wararka xanta ah ee daahfurka cusub 14-inch iyo 16-inch MacBook Pro Oo waxaan helnaa xoogaa isbeddel ah marka la barbar dhigo moodooyinka hadda jira. Wararkaan xanta ah ee ka digaya micnaheedu maahan si kasta oo ay u noqon doonaan xaqiiqo ka jirta qalabka cusub, laakiin hubaal in qaar ka mid ah ay ku dambeeyaan in la xaqiijiyo.
Maanta waxaan arki doonnaa qaar ka mid ah waxyaabihii ugu muhiimsanaa daadadkan iyo in aakhirkii aan ku dambayn karno inaan ku aragno qalabka cusub ee Apple uu diyaar u yahay inuu bilaabo. Waxa ugu dhow ee la xaqiijiyay ayaa ah inay ku daraan processor -yaasha mashiinadan iyo kuwa waxay noqon doontaa mid tayo badan, awood badan leh oo leh nolol batari dheer.
1 Processor -ka M1X ama M2
1.1 Naqshad la mid ah laakiin leh isbeddelo
1.2 Slot loogu talagalay SD, HDMI iyo MagSafe
1.3 Bandhigga Mini-LED iyo iyada oo aan lahayn Bar Bar
Processor -ka M1X ama M2
Wax badan ayaa laga sheegayaa processor -rada imaan kara kombiyuutarradaan cusub ee Apple mana cadda in ay ahaan lahayd horusocodka M1 ee hadda ama si toos ah processor cusub. Taasi waa sababta wararka xanta ah ee ku saabsan M1 ama M2 ay u sii ahaadaan mowduuca ugu weyn ee doodda ka dhexeysa warbaahinta khaaska ah iyo isticmaaleyaasha.
Waxa u muuqda inay caddahay ayaa ah in qalabka cusubi uu ku dari doono processor -ka la hagaajiyay iyo sida wararka qaarkood sheegaan 10-core CPU oo laga heli karo 16 iyo 32-qaabayn. Waxtarka weyn, awoodda iyo madaxbannaanida qalabka ayaa noqon doona waxyaabaha ugu waaweyn ee arrintan la xiriira.
Naqshad la mid ah laakiin leh isbeddelo
Naqshadeynta MacBookga wax yar bay iska beddeleysaa markaan ku eegno indhaha qaawan, laakiin moodooyinkii ugu dambeeyay waxaan horay u aragnay isbaddallo la taaban karo oo qaabkiisa ah oo xarriiqani waxay noqon kartaa tii raaci doonta 14 iyo 16-inji MacBook Pros taas oo dhawaan soo bandhigi doonta. Khadka naqshadeynta oo la mid ah midka hadda M1-processor MacBook Pros.
Slot loogu talagalay SD, HDMI iyo MagSafe
Shirkadda Cupertino ayaa meesha ka saartay Afyare kaarka SD, dekadda HDMI, iyo ku -dallacidda MagSafe ee MacBook Pros wakhti ka hor. Wararka xanta ah ee hadda jira ayaa tilmaamaya in kasta oo USB C uu yahay heer, Apple waxay qorshaynaysaa inay dib ugu soo celiso booska kaarka deked HDMI ah iyo lacag -qaadka MagSafe oo la mid ah kii lagu hirgeliyey iPhone 12 -ka hadda.
Wararkaas xanta ah ee adeegsadayaasha qaar ayaa rumeysan inay suurtagal tahay inay rumoobeen tan iyo hadda Apple waxa ay isku daydo inay baabi'iso dhammaan noocyada fiilooyinka muddo dheer, laakiin taa bedelkeeda waxay sidoo kale ogaadaan in Waxay "ku qasbayaan" adeegsadayaasha inay iibsadaan xarun leh dekado badan markaa way fiicnaan lahayd haddii qaar ka mid ah dekadaha kaarka ama xitaa HDMI ay soo noqdaan. Waan arki doonaa waxa dhaca.
Bandhigga Mini-LED iyo iyada oo aan lahayn Bar Bar
Ugu dambayn, ma iloobi karno suurtagalnimada in Apple si toos ah wax u soo kordhiso shaashad mini-LED ah oo ku jirta kombiyuutarada oo meesha ka saareysa Touch Bar si aad u hesho meel bannaan oo dheeraad ah oo aad u yarayso gebi ahaan. Haddii aan isbarbar dhigno guddiyada Retina LCD oo leh shaashadaha mini-LED waxaan ogaannay in kan dambe uu bixiyo heerar dhalaalaya oo sarreeya, madow qoto dheer, isbarbar dhig wanaagsan, cimri dheeri iyo by qasaaro isticmaalka tamarta sare sidaa darteed waxaa lagama maarmaan ah in si fiican loogu cabbiro hirgalintan MacBook Pros of 14 iyo 16 inches.
The Touch Bar ee horseeday 2016 MacBook Pros si buuxda uguma xirna isticmaalka maalinlaha ah sidaa darteedna waxay ku dambayn kartaa in laga baxo. Waxaa jira warar xan ah oo tilmaamaya in kombiyuutarradaan cusub aysan ku dari doonin barta taabashada muranka badan leh ee Apple ku darto MacBook Pro, waan arki doonnaa haddii ay aakhirka go'aansadaan inay tirtiraan iyo in kale hoos u dhac kale oo ku yimaada qiimaha kama dambaysta ah ayaa waliba ku xirnaan kara tan ee MacBook Pro.
Si kasta ha ahaatee, dhammaan wararkaas xanta ah lama xaqiijin, si macquul ahna waa inaan sugno ilaa soo bandhigidda rasmiga ah, taas oo jidka, taariikhda aan la aqoon, si aan u aragno in ugu dambayntii Apple go'aansato inuu hirgeliyo dhammaan wararkaas. Waxa la hubo ama la hubo, waa imaanshaha processor -ka cusub ee MacBook Pros maadaama tani ay tahay wax Apple caadi ahaan sameeyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » MacBook Pro » Qaar ka mid ah wararka dillaacay oo loo xaqiijin karo 14-inji iyo 16-inji MacBook Pros
Hagaajinta kaaliyaha Siri waa mid joogto ah oo mararka qaarkood qarsoon: "Daraasadda Hadalka Siri"